33Across: Pre-Bid လိမ်လည်မှု Filter နှင့်အတူ In-View ကိုပရိသတ်ကိုငွေရှာ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 15, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ဒီနှစ်မှာအွန်လိုင်းထုတ်ဝေသူများရုန်းကန်နေရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အများစုသည်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာထုတ်ကုန်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သူတို့၏ခေါင်းစဉ်လွှမ်းခြုံမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ ပရိသတ်ကြည့်ရှုခြင်းစာရင်းတိုးတက်စေရန်ပရိသတ်များကို ၀ ယ်ယူပြီး၊ သူတို့၏ဆိုဒ်များကိုကြော်ငြာများအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးဖွင့်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကအမှားရဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ၀ ယ်တာကိုရှောင်ကြဉ်တယ်၊ ခေါင်းစဉ်တွေကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားတယ်၊ ကြော်ငြာမပါတဲ့ကြော်ငြာကနေအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, ကြော်ငြာကွန်ယက်များတုံ့ပြန်နေကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၆၀ ကိုဒီနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာအတွက်သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်သည် သမ်သုတေသန။ တူပလက်ဖောင်းများ 33 ဖြတ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မက်ထရစ်ကိုသာအာရုံစိုက်မည့်အစားပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အတွက်အွန်လိုင်းကြော်ငြာနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။ ကြော်ငြာသူများနှင့် CMO များသည်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းကြော်ငြာသုံးစွဲမှုမှ ROI ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ မီဒီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကောင်စီ (MRC) ကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများသည်ကြော်ငြာတစ်ခုဟုသတ်မှတ်မရဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ဘားကိုနိမ့်ကျစွာသတ်မှတ်ထားသည် ရှုခင်း.
မိုဘိုင်းနှင့် Desktop ကြော်ငြာမြင်ကွင်းများသည်အနည်းဆုံးတစ်စက္ကန့်အတွက်ပြသရန်ကြော်ငြာများအတွက်၊ အနည်းဆုံးတစ်စက္ကန့်လျှင်ဗီဒီယိုကြော်ငြာအတွက် ၂ စက္ကန့်လိုအပ်သည်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက
အပြန်အလှန်အားဖြင့်ထုတ်ဝေသူများကသူတို့၏ဆိုဒ်များကိုမည်သို့ ၀ င်ငွေရရန်ကြိုးစားနေသည်။ သုံးစွဲသူများသည်အကြောင်းအရာများကိုစားသုံးသောအခါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ဆီလျှော်သောမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းပြissuesနာများသည်အွန်လိုင်းကြော်ငြာများနှင့်စားသုံးသူနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုနက်ရှိုင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်ခု၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပုံဖော်သည် 33 ဖြတ်ပြီး.
33 ဖြတ်ပြီး ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူ၎င်း၏အစီအစဉ်ပလက်ဖောင်းတိုးချဲ့ခဲ့သည် Desktop In-Feed ဗီဒီယို နှင့် Desktop In-Feed သက်ရောက်မှု။ ကြေငြာသူများသည် ၀ င်ငွေတိုးရန်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဤထုတ်ကုန်အသစ်များသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ထည့်သွင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောကြော်ငြာများကိုထိပါးနှိမ်နင်းခြင်းမရှိ။ ကြော်ငြာယူနစ်များသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ scroll လုပ်ရပ်များကိုတုန့်ပြန်ပြီးဖန်တီးမှုသည်အနည်းဆုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေသရွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဗီဒီယိုသည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှ၊ 33 ဖြတ်ပြီးDesktop In-Feed ဗွီဒီယိုကြော်ငြာယူနစ်များသည် ၁၅ နှင့် ၃၀ စက္ကန့်အစက်များအားအလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးပြီးမိုဘိုင်းနှင့်စားပွဲတင်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖန်တီးမှုအနည်းဆုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသောမြင်ကွင်းသည်အကြောင်းအရာစီးဆင်းမှုတွင်ပေါ်လာမည်။ အသုံးပြုသူမြင်ကွင်းမှကြည့်လိုက်လျှင်ဗီဒီယိုသည်၎င်းကိုကြည့်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်များသည်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ ကြော်ငြာကိုအသံပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူများအားအတွေ့အကြုံအပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် desktop နှင့် mobile တို့တွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသောအတွေ့အကြုံများလိုအပ်သည့်သုံးစွဲသူများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှုမြင့်မားသောပထမ ဦး ဆုံး In-feed ထုတ်ကုန်များအတွက် ၀ ယ်သူများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ Peter Cunha, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်း
ထုတ်ကုန်အသစ်များကရောင်ပြန်ဟပ်သည် 33 ဖြတ်ပြီးမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဆန်းစစ်ချက်အရအွန်လိုင်းကြော်ငြာများ၏မည်မျှကြည့်ရှုနိုင်မှုနှင့်ကြော်ငြာတစ်ခုသည်အချိန်နှင့်အမျှ၎င်းအချက်နှစ်ချက်သည်သုံးစွဲသူများနှင့်ထိတွေ့မှုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုတိုင်းတာသည်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ထုတ်ဝေသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၇၃၈ ခုတွင်အွန်လိုင်းကြော်ငြာပေါင်းသန်း ၁၆၀ ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးနောက် 160Across သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စားသုံးသူအများစုသည် ၁၅ စက္ကန့်အမှတ်အသားတွင်ကြော်ငြာကိုကလစ်နှိပ်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှထိတွေ့မှုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသည်။ ကိရိယာအားဖြင့်ကွဲသည်:
သုံးစွဲသူနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ ၅၀% သည် ၁၅ စက္ကန့်ကြာပြီးနောက် desktop ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်
မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များတွင်သုံးစွဲသူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ခုနစ်စက္ကန့်အကြာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်
၃၀ စက္ကန့်ကြာသောအမှတ်အသားအရထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားလုံး၏ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် desktop ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်တက်ဘလက်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကအွန်လိုင်းကြော်ငြာကိုထိရောက်စေရန်အတွက်ကြော်ငြာများသည်အလွန်နိမ့်ကျသောမြင်ကွင်းနှင့်လက်ရှိနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ ရှုမြင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသက်သေပြသည်။
အကယ်၍ စျေးကွက်သမား၏အဓိကမက်ထရစ်သည် MRC လမ်းညွှန်အပေါ် အခြေခံ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်တစ်စက္ကန့်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်သည်ဆိုပါက။ သုံးစွဲသူများသည်ထိုကြော်ငြာကိုမြင်တွေ့ရမည့်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ CMOs များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာပြန်လည်ရရှိစေရန်အတွက်ကြော်ငြာမြင်ကွင်းနှင့်အချိန်ကာလနှစ်ခုလုံးတွင်ဘားကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ Eric Wheeler, စီအီးအို, 98Across ။
စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများ မှလွဲ၍ ထုတ်ဝေသူများနှင့်ကြော်ငြာသူများသည်ကြော်ငြာ၏ပျမ်းမျှအချိန်ကိုကြည့်ပြီးကြော်ငြာယူနစ်များသည်တုန့်ပြန်မှုရရန်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အလုံအလောက်ရှည်လျားသောအမြင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာတွင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသောအစက်များကိုရှောင်ရှားရန်၊ ၎င်းတို့သည် In-feed mobile နှင့် display unit များကိုစျေးကွက်ထဲသို့ထည့်သင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပဟေuzzleိအလယ်၌ကြီးမားသောအလျားလိုက်စကားလုံးတစ်လုံးကို decipher လုပ်ပါကအပြင်းထန်ဆုံး crossword puzzles များကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ များစွာသောခက်ခဲသောပဟေmanyိများတွင်အများအားဖြင့် ၃၂ မှ ၃၃ ခန့်ရှိသည်။ 33 ဖြတ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာ၏ပဟေိကိုသော့ဖွင့်သည်။
Tags: 33 ဖြတ်ပြီး၃၃ ရာခိုင်နှုန်းကြော်ငြာအမြင်မီဒီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကောင်စီMRCအစီအစဉ်ကြော်ငြာထုတ်ဝေသူငွေကြေးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များ